Akhriso: War murtiyeedka laga soo saaray Shir Madaxeedka IGAD – STAR FM SOMALIA
Akhriso: War murtiyeedka laga soo saaray Shir Madaxeedka IGAD
Shir Madaxeedkii IGAD ee maanta lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray war murtiyeed ka koobnaa 22 qodob, iyadoo Wasiiradda Arrimaha Dibadda Kenya Amnia Mohamed ay saxaafada u akhrisay.
Madaxda IGAD ayaa sheegay inay ixtiraam u hayaan adkeynta madax banaanida, midnimada dhulka iyo dadka Soomaaliyeed, iyagoo caddeeyay in lagama maarmaan ay tahay in loo daayo ka tashiga aayahooda
IGAD ayaa soo dhoweeyay go’aanada Madasha hoggaanka qaranka iyo doorashadan sanadkan 2016 ka dhaceyso dalka, sidoo kale waxay ku baaqeen in la qabto doorasho hufan, xor ah, isla markaana waqtigeeda ku dhacda.
Waxaa la amaanay dhismaha maamul goboleedyada, iyadoo lagu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameystiro Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Sidoo kale Ciidamada AMISOM ayaa lagu ammaanay kaalinta ay ka qaadeyn nabadeynta Soomaaliya, waxaana la cambaareeyay weerarada Al-Shabaab ku hayaan ciidanka AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
Waxaa lagu dhawaaqay sanduuq dhaqaale oo Soomaaliya ay ku taageerayaan dalalka deriska ah iyo Beesha Caalamka
Hadaba halkan hoose ka akhriso War murtiyeedka oo ku qoran Luqada English-ka:-
Dawlada Somaliya iyo Kenya oo heshiis kala saxiixday